Temple Mofomamy Mofomamy - Famolavolana
Mofomamy Mofomamy Avy amin'ny firongatry ny fitomboan'ny fanaovana mofo any an-trano no ahitantsika ny filàna mofomamy vaovao mijery mody, izay mety ho voatahiry mora ao anaty kaomina na mahasarika. Mora amin'ny fanadiovana sy fanasana vilia. Ny Tempoly dia mora apetraka sy mifototra amin'ny alàlan'ny fikorontanana amin'ireo takelaka eo afovoany. Ny fanilihana dia tsotra fotsiny amin'ny fikatonan'izy ireo fotsiny. Ny singa 4 lehibe rehetra dia ampiarahin'ny Stacker. Ny Stacker dia manampy amin'ny fitazonana ny singa rehetra miaraka amin'ny fitahirizana compact angled marobe. Afaka mampiasa konfora takelaka samihafa ianao amin'ny fotoana samihafa.
Anaran'ny tetikasa : Temple, Anaran'ny mpamorona : Chris Woodward, Anaran'ny mpanjifa : CWD ltd .
Mofomamy Mofomamy Chris Woodward Temple